SHABAKAD HALIS badan oo ka dhex abuurantay Gudaha Maamulka Gobolka Banaadir.YARIISOW Farsamada uu macaashka kaga sameeyay dhulalka, Yaa eeda dusha laga saaraya, warbixin | Newsomali
SHABAKAD HALIS badan oo ka dhex abuurantay Gudaha Maamulka Gobolka Banaadir.YARIISOW Farsamada uu macaashka kaga sameeyay dhulalka, Yaa eeda dusha laga saaraya, warbixin
Koox ama Shabakad ayaa ka dilaacday gudaha Maamulka Gobolka Banaadir taas oo boob farsameysan ku haysa dhulalka danta guud oo isugu jira kuwa ay bixisay Dowladdii Xasan Sheekh iyo kuwa cusub oo hadda la bixinayo.
Guddoomiyah Gobolk Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho C/raxmaan Yariisow iyo mid ka mid ah kuxigeenadiisa, Ganacsato iyo dalaaliin ayaa noqday shabakad isku xiran oo macaash ka sameynaya dhulal ay bixisay Dowlddii Xasan Sheekh Maxamud.
Farsamadan cusub ee la adeegsanaya ayaa ah in dhulalkii ay bixisy Dowlddii hore ee loo baahan yahay fasax si loo dhiso fasaxaasna laga rabo Dowladda hoose muqdisho hadda laga sameynayo macaash.
Halkii boos waxaa lagu fasaxaya 1500 oo Dollar, dhulalka hadda la fasaxay waxaa ka mid ah Dugsigii Sare ee Degmada Howl wadaag oo la siiyay Dahabshiil, Yariisowna farqaha loogu shubay hal Milyan oo Dollar, dhul ballaaran oo ku yaala degmada Wada jir, iyo dhulal kale.
Qorshaha cusub ayaa ah in dhulka la fasaxo wixii xumaan ahna dusha laga saaro Xukuumaddii Xasan Sheekh Maxamud.
Warar hoose ayaa sheegaya in Xasan Kheyre Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya qeyb ka yahay arrimaha dhulka ee macaashka laga sameynayo wax badan ka og yahay.
Hase yeeshe Villa Soomaaliya ayaa la sheegay inay hadda ku soo buraarugtay arrimaha dhulka oo durba faragelin ku sameynaysa arrimaha taagan.
Yariisow ka hor Guddoomiyaha Gobolka Banaadir noloshiis caadiga ah waxay ahayd mid iska caadi ah hase yeeshe haatan waxaa uu ka mid yahay siyaasiyiinta macaashka ka sameeyay siyaasadda dalka, waxaa uuna ka mid yahay kuwa dhaqaale ahaan ugu taajirsan siyaasadda dalka.
Mid ka mid ah Guddoomiye kuxigeenada Gobolka ayaa isna miisaan ku leh Fadeexadaha dhulka ka taagan hase yeeshe wrbixinadeena dambe ayaa idinku soo gudbinaynaa